कसलाई रोज्ने सृष्टि कि साम्राज्ञी ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV कसलाई रोज्ने सृष्टि कि साम्राज्ञी ? | Sagarmatha TV
धिरज र आकाश आशावादी
काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत शुक्रबारबाट दुई चलचित्र ‘इन्टुमिन्टु लण्डन’मा र ‘बाँध मायाले’को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । दुवै चलचित्र दर्शकका लागि प्रतिक्षित छन् भने निर्माण पक्ष पनि चलचित्रबाट निकै आशावादी देखिएको छ । लगानीका हिसाबले यी चलचित्रले कत्तिको प्रतिफल प्राप्त गर्ने हुन् त्यो भने केही दिनको व्यापारिक रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा पत्तो हुने नै छ ।
चलचित्र इन्टुमिन्टु लण्डनमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र अभिनेता धिरज मगर भएका कारण प्रतिक्षित बनेको छ भने नायिका सृष्टि श्रेष्ठ र आकाश अधिकारीका कारण बाँध मायाले चलचित्र दर्शकले रुचाउनेमा निर्माण पक्ष ढुक्क देखिन्छ । त्यसो त चलचित्रले बजारमा राम्रो व्यापार गर्न नसकिरहेका बेला यो मितिमा पनि बीग बजेटका दुई चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदा पक्कै पनि एकअर्कामाथि चुनौती हुने नै छ ।
‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’बाट साम्राज्ञी चलचित्र सफलतामा ह्याट्रिक गर्ने दाउमा देखिएकी छिन् । ‘ड्रिम्स’बाट एकाएक साम्राज्ञी उदाएकी हुन् । यो फिल्म बक्सअफिसमा सुपरहिट साबित भयो । ‘ड्रिम्स’बाटै ले उनको ड्रिम पूरा भयो । एकपछि अर्को गरी चलचित्रमा उनलाई अफरको ओइरो लाग्यो । अधिकांश फिल्म मेकर्सहरु उनलाई लिएर फिल्म बनाउन लालयित बने ।
साना हुन् वा ठूला ब्यानरमात्र नभएर अधिकांश युवा दर्शकको मन मस्तिष्कमा साम्राज्ञी बस्न सफल भइन् । ‘ड्रिम्स’ पछि रिलिज भएको दोस्रो फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ पनि सुपरहिट भएपछि उनी पारिश्रमिकमा पनि डिमाण्डेड हिरोइन बन्न पुगिन् । त्यसपछि प्रदर्शनमा आएको ‘तिमीसँग’ र ‘कायरा’ले भने बक्स अफिसमा अपेक्षाकृत व्यापार गर्न सकेनन् । उनको सुपरहिट चलचित्र ह्याट्रिक गर्ने सपना पनि अधुरै रह्यो ।
अहिले उनको पाँचौ प्रोजेक्टका रुपमा प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘इन्टुमिन्टु लण्डनमा’ले स्टारडम उकास्नुका साथै ह्याट्रिकको आशा देखाएको निर्माण पक्षको दाबी हो । कथावस्तु राम्रो भएका कारण दर्शकले साथ दिनेमा निर्माण पक्ष ढुक्क छ । त्यस्तै धिरज मगरको क्रेजलाई पनि निर्माण पक्षले क्यास गर्न खोजेको छ । चलचित्रको प्रचार प्रसारमा गरेको दुःख र सो क्रममा पाएको प्रतिक्रियाबाटै निर्माण पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छ । चलचित्र ‘इन्टुमिन्टु लण्डनमा’ले गीत संगीत र ट्रेलरका कारण रिलिज अगावै राम्रो हाइप बनाइसकेको थियो ।
रेनाशा वान्तवा राई निर्देशित चलचित्रमा साम्राज्ञी र धिरजको प्रेमभाव देखाइएको बुझिएको छ । चलचित्रमा सारुक ताम्राकार, अर्जुन श्रेष्ठ, दिलभुषण पाठक, विजय लामा र रुवी राणाको पनि अभिनय रहेको छ । ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ लाई प्रज्ज्वल समशेर जबरा र प्रभु समशेर जबराले संयूक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा मिरा अर्थात् मिन्टुको भूमिकामा साम्राज्ञी, इशान अर्थात् इन्टुको भूमिकामा धिरज प्रस्तुत छन् ।
आई कोर फिल्मस्को व्यानरमा निर्मित फिल्मका सह–निर्माताहरुमा सुलेखा राई, बसन्त तामाङ र सुष्मिता जिरेल रहेका छन् । प्रज्ज्वल समशेर जबरा र रेनाशाकै कथा रहेको रोमान्टिक लभस्टोरीमा शैलेन्द्र धोज कार्कीको छायांकन, टिसूजिल कर्माचार्य, हर्कुलस बस्नेत, स्वप्न सुमन र बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको छ । फिल्मको लेखकमा अभिमन्यु दिक्षित र रेनाशा रहेका छन् भने, आभास कर्माचार्यको संवाद रहेको छ ।
त्यस्तै इन्टुमिन्टसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको चलचित्र बाँध मायाले पनि दर्शकको माया बटुल्ने आशा राखेको छ । विदेशमा प्रदर्शन भइसकेको चलचित्र शुक्रबारबाट स्वदेशमा प्रदर्शन भएको हो । विदेश प्रदर्शनबाट निकै नै राम्रो प्रतिक्रिया बटुलेको चलचित्रले स्वदेशका दर्शकलाई हलसम्म तान्नेमा निर्माण पक्ष आशावादी छ ।
चलचित्रको प्रमोसनका लागि नायिका श्रेष्ठ र नायक अधिकारी काठमाडौंका विभन्न कलेज–कलेजमा पुगेर गरेको कसरतले पनि थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । चलचित्र ‘बाँध मायाले’मा राजाराम पौडेल, रविन्द्र प्रताप सेन, विशाल चाम्लिङलगायतको पनि अभिनय छ । फिल्मलाई बाबु श्रेष्ठले खिचेका हुन् भने द्वन्द्व निर्देशन रोशन श्रेष्ठको छ । चलचित्रबाट नायिका तथा पूर्व मिस नेपाल सृष्टि निकै नै आशावादी देखिएकी छन् ।